MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA PUGAPOO IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Pugapoo iyo Sawiro
Pug / Poodle ey isku dhafan oo isku dhafan
Maggie the Pugapoo isagoo laba sano jir ah— 'Hooyadeed waxay ahayd Pug aabeed oo nadiif ah Mini Poodle. Maggie waxay haysataa jaakadda Poodle waxayna u baahan tahay is qurxin joogto ah, laakiin haddii kale waa caruusad ku habboon oo jecel dadka, gaar ahaan carruurta.
Pugapoo ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Baabuur iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Pug-A-Poo
Diiwaangeliyaha Taranka Naqshadeeye = Pug A Poo
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Pug-A-Poo
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Pugapoo
Lucy digaagga Pug / Toy Poodle ee ey isku dhafan (Pugapoo)
Jasmine the Pug-A-Poo at 1 sano jir — hooyadeed waxay ahayd Pug nadiif ah aabeheedna wuxuu ahaa Poodle saafi ah. Waxay leedahay shaqsiyad cajaa’ib leh, way fududahay in la tababaro aadna waa loo jecel yahay. Waxay jeceshahay inay seexato bustayaasha hoostooda sida aadanaha. 'Wax yar ayey daadisaa, sida Pug oo kale. Xaqiiqdii iyadu ma leh dhogorta Poodle gabi ahaanba. Jasmine dhogorteeda waxaa lagu arki karaa sariirta, rooga iyo shaatiyadayada markii aan qabanayno, laakiin way fiicantahay, timo yar yar oo aan aragno, ma ahan buro waaweyn sida eeyaha qaarkood ay gadaal uga tagi doonaan. Dabada ayaa u duuban sida Pug’s oo kale.
Luna Pugapoo oo ah eey markay 2 bilood jirto. - Iyadu aad bay u macaan tahay, edeb daran tahay oo caqli badan tahay da 'yar.
Litter of puug-A-Poo eey —Hooyadood waxay ahayd Pug aan caadi aheyn aabahoodna wuxuu ahaa Poodle saafi ah. U fiirso sida eyda qaar ay u leeyihiin jaakadaha nooca Poodle (oo aan daadin doonin) qaarna waxay leeyihiin noocyo nooca Pug-ga ah (oo laga yaabo ama aan la daadin karin). Koofiyadaha leh jaakadaha loo yaqaan 'Poodle' waa inaad u qaadataa qofka is-sharraxaya si looga jaro. Ciyaalka ku labbisan dharka khafiifka ah 'Pug' ayaa laga yaabaa inay gaagaamaan oo laga yaabee inaadan u baahnayn inay iska jaraan. Si kastaba ha noqotee, tani lama hubo ilaa cunuggu koraan.
Litter of Pug-A-Poo eey - hooyadooda waxay ahayd Pug nadiif ah aabahana wuxuu ahaa Poodle saafi ah.
Cusboonaysiinta: Kani waa sawirka Rosco, oo ah mid ka mid ah Pug-yada u muuqda ee kor ku xusan, dhammaantoodna ku koray qiyaastii hal sano jir. Milkiilayaashiisa ayaa leh, Isagu waa mid gaar ah. Khasab maahan in la qurxiyo, laakiin markuu yahay, timuhu aad ayey u kala duwan yihiin. Way ka jilicsan tahay, khafiifsan tahay mana daadiso. '
Jax ee Pug-A-Poo eey ah oo jira 3 bilood jir — isagu waa qeyb Pug iyo qeyb Toy Poodle ah.
Pug-A-Poo eey, sawir xushmad leh oo ah 3 Pines Kennels
Eeg tusaalooyin badan oo ah Pugapoo
isku darka 'bull terrier jack russell mix'
boqorka charles cavalier bichon frize mix
sida loo kiciyo feeryahan